एयरबस साइबरसेक्युरिटी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मंगल ग्रहमा पाइला राख्ने | प्रविधि
स्थान: घर » पोष्ट गर्दै » प्रविधि » एयरबस साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, र मंगल ग्रहमा पाइला राख्ने
एयरलाइन्स • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • देश | क्षेत्र • गन्तव्य • जर्मनी • समाचार • प्रेस वक्तव्य • प्रविधि • चलिरहेका
उड्डयन कसरी थप दिगो हुन सक्छ? पहिलो मानवले मंगल ग्रहमा कहिले पाइला राख्छ ? Airbus मा साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता
अग्रगामी एयरोस्पेस ILA बर्लिनको नारा हो। यो हिजो सुरु भएको थियो र जुन 26 मा समापन हुनेछ।
उड्डयन कसरी थप दिगो हुन सक्छ? पहिलो मानवले मंगल ग्रहमा कहिले पाइला राख्छ ? युरोपेली रक्षा नीतिको विकास के हो? आपूर्तिकर्ता उद्योगको कुन आविष्कारहरूले उड्डयन र अन्तरिक्ष उद्योगमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्छ?
थप मा: ILA बर्लिन
स्यान्डल रिसोर्ट्स इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रवेशको सम्झनामा...
ब्लोसम होटल ह्युस्टनले गर्मीको लागि विशेष उपहारहरू प्रस्तुत गर्दछ